युगसम्बाद साप्ताहिक - देउवाको यो जीतको के अर्थ ?
Thursday, 05.28.2020, 03:31am (GMT+5.5) Home Contact
देउवाको यो जीतको के अर्थ ?
काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर देखिए पनि सो पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने जीतको दोहोरो ह्याट्रिक गर्नुभएको छ । सभापति देउवाको व्यक्तिगत इतिहास रचिए पनि पार्टी भने उहाँकै कार्यकालमा उहाँको इतिहास निर्माणसंगैसबैभन्दा नाजुक मोडमा पुगेको छ । देउवाले यसपटक पनि विजय प्राप्त गरेसंगै दोहोरो ह्याट्रिक पूरा गर्नुभएको छ ।
देउवाले सम्पन्न निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेसंगै दोहोरो ह्याट्रिक पूरा गर्नुभएको छ । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि लगातार अपराजित रहँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक पनि डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।
उहाँले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य खगराज भट्टलाई हराउनुभयो । भट्ट यसअघि दुईपटक देउवासंग हारिसक्नुभएको थियो ।
देउवाले २८ हजार ४४ मत प्राप्त गर्दै जित हात पार्नुभयो भने भट्टले २१ हजार ११५ मत ल्याउुभयो । ०४८, ०५१ र ०५६ सालको निर्वाचनमा विजयी हुनुभएका देउवा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन ०६४, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ०७० र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७४ मा पनि विजयी भएर डबल हृयाट्रिक गर्नुभयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ बाट देउवासंग प्रतिस्पर्धामा आउनुभएएका भट्ट ०७४ सालसम्म आउँदा तीनवटा निर्वाचनमा देउवासँगै पराजित हुनुभयो ।
देउवाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ०६४ मा भट्टलाई झिनो मतले पराजित गर्नुभएको थिए भने ०७० सालको निर्वाचनमा भट्ट देउवासँग दोब्बर मत अन्तरमा पराजित हुनुभयो र यस पटकको निर्वाचनमा पनि देउवाले फराकिलो अन्तरमा भट्टलाई हराउनुभयो ।
त्यस्तै यसपटकको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं. २ का रविन्द्र अधिकारीले पनि ह्याट्रिक पूरा गर्नुभयो । उहाँ २०६४ र २०७० को संविधानसभामा निर्वा्िचत हुनुभएको थियो । यसपटक बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका रुपमा अधिकारीले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई ९ हजार मत अन्तरले पराजित गरी ह्याट्रिक गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेलले पनि ह्याट्रिक गर्नुभो ।